Princess Cruises waxay u keentaa safar qaali ah Bariga Malaysia iyo Brunei
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Daalacanayo Hadda » Princess Cruises waxay u keentaa safar qaali ah Bariga Malaysia iyo Brunei
Brunei Breaking News • Daalacanayo Hadda
SINGAPORE - Shirkadda Carnival & plc maanta waxay ku dhawaaqday in astaanta Princess Cruises ay ka faa'iideysaneyso sumcadda sii kordheysa ee safarka dalxiiska ee gobolkan iyagoo keenaya khibrad dalxiis oo qaali ah.
SINGAPORE - Carnival Corporation & plc maanta waxay ku dhawaaqday in astaanta Princess Cruises ay ka faa'iideysaneyso sumcadda sii kordheysa ee safarka dalxiiska ee gobolkan iyadoo u keeneysa khibrado dalxiis oo qaali ah safarrada ka socda Sabah, Sarawak iyo Brunei iyadoo loo marayo xilliyadeeda dejinta guryaha.
Princess Safir, oo ka mid ah 18 markab oo raxan raaca ah, ayaa hadda ku sugan gobolka markiisii ​​labaad ee dejinta guriga laga bilaabo Nofeembar 2015 ilaa Maarso 2016, iyagoo ka soo wareegaya Singapore ilaa Koonfur-bari Aasiya ee Malaysia, Indonesia, Vietnam, Cambodia iyo Thailand. Tani waa mid ka mid ah dejinta ugu weyn ee khadadka dalxiis ee ugu sarreeya gobolka, oo ka kooban toddobo dal iyo 12 dekedo, oo dherer ballaaran oo safarro dhaadheer ah oo u dhexeeya saddex illaa 11 maalmood.
Princess Safir waxay booqatay Muara, Brunei maalin iyo wakiilada safarada iyo sidoo kale xubnaha warbaahinta ayaa lagu casuumay markabka si ay ula kulmaan naftooda xarumaha raaxada leh ee khadka. Martida saaran Sapphire Princess waxay ku raaxeysan doonaan waaya-aragnimada Princess Cruises oo ay kujiraan noocyo kaladuwan oo heer caalami ah, dukaamaysi bilaash ah iyo madadaalo, marka lagu daro saxeexyada cusub sida filimada caanka ah ee Xiddigaha Xiddigaha, oo ah meel dusha sare leh tiyaatarka, iyo Sanctuary, oo ah dabaq sare oo si gaar ah loogu talagalay dadka waaweyn.
"Cruising wuxuu noqonayaa ikhtiyaarka safarka caanka ah ee dalxiisayaasha ka imanaya Sabah, Sarawak, iyo Brunei sababo la xiriira rabitaanka sii kordhaya ee sahaminta gobolka hab gaar ah," ayuu yiri Farriek Tawfik, Agaasimaha Koonfur-bari Aasiya, Princess Cruises. "Xilliyadayada la soo dejiyo ee Koonfur-bari Aasiya iyo safarrada dalxiis ee heer caalami ah waxay martida siin doonaan waayo-aragnimo safar lama ilaawaan ah oo ay raadinayaan."
Iyadoo ay kuxirantahay qanacsanaanta macaamiisha sare ee xilli ciyaareedkii hore, Princess Cruises waxay ku dhawaaqday in Princess Princess ay bilaabi doonto xilli ciyaareedkeedii ugu horeeyay ee gobolka sanadka 2016, oo ay ku jiraan safarro aad u tiro badan oo safarro ah oo ay la socdaan 16 safarro safar ah oo u dhexeeya saddex illaa toban maalmood iyo 14 safar dheer oo safar ah sagaal ilaa 21 maalmood, taas oo isugu jirta shiraacooyin gaagaaban.
Tani waxay la jaanqaadeysaa himilooyinka dowladaha Malaysia iyo Brunei si looga faa'iideysto dalxiiska dalxiiska si loo kordhiyo taraafikada booqdayaasha iyo kharashaadka. Aragtida Malaysia ee Straits Riveria Cruise Playground waxay bartilmaameedsaneysaa inay keensato RM $ 1.75 bilyan oo dakhli guud ah isla markaana abuurta shaqooyin 10,000 sanadka 2020 laga bilaabo dalxiiska dalxiiska.
Isbedelada soo ifbaxaya ee markab dalxiis
Princess Cruises ayaa sidoo kale goob joog ka ah astaamaha safarka dalxiiska ee Koonfur Bari Aasiya sida kuwa ugu horeeya, dhalinyarada waaweyn iyo qoysaska, maadaama Aasiya badan ay raadinayaan inay ku sahamiyaan gobolkooda markab dalxiis. Tani waxay si weyn uga duwan tahay suuqyada kale ee Yurub iyo Waqooyiga Ameerika, halkaasoo safarka dalxiiska ay ku badan yihiin waayeelka iyo dadka howlgabka ah.
Xiisaha loo qabo fasaxyada dalxiiska ee ka imanaya kooxaha macaamiisha kala duwan - kuwa ugu horreeya, kuwa biloowga gala iyo lamaanayaasha, qoysaska, waa kuwo aad u tiro badan waxaanan fileynaa koror laba-godle ah oo socdaalayaasha Malaysia iyo Brunei ah oo dalxiis ku tagaya sannadaha soo socda, ”ayuu yidhi Mr. Tawfik.
Princess Cruises waxay leedahay barnaamij wacyigalin socdaal oo socda ah oo ku saabsan gobolka kaas oo muuqaalka ugu weyn uu yahay barnaamij tababar oo khadka tooska ah lagu magacaabo Princess Academy kaas oo u sahlaya wakiilada safarka inay noqdaan khubaro ku saabsan diyaaradaha Princess, meelaha ay tagayaan iyo barnaamijyada. Princess Academy ayaa hadda laga bilaabay Brunei iyo Bariga Malaysia, jawaabtuna waxay noqotay mid dhiirigelin leh, iyadoo wakiilo badan oo safarka ah ay saxiixeen inay bilaabaan koorsooyinka internetka.
Si looga sii faa'iideysto suurtagalnimada suuqyada dalxiiska ee Malaysia iyo Brunei, Princess Cruises waxay sii wadi doontaa barnaamijyadeeda suuqgeynta iyo dadaallada Sabah, Sarawak iyo Brunei, iyadoo si dhow ula shaqeyn doonta wakiillada safarka si kor loogu qaado safarka dalxiis ahaan xulasho ahaan.
Si aad si fiican ugu adeegto martida Singapore iyo Koonfur-bari Aasiya, Sapphire Princess iyo Diamond Princess labaduba waxay yeelan doonaan xubno shaqaale ah oo luuqado badan ku hadla oo ku jira boosaska martida ee muhiimka ah inta lagu jiro xilligeeda dekedda ee Singapore. Liisaska qolka cuntada waxaa ka mid ah suxuunta maxalliga ah, sida Nasi Goreng, Laksa iyo Bariiska Digaagga, oo ay weheliso qadadka caalamiga ah ee khadka. Barnaamijyada kobcinta ee sida gaarka ah loo qaabeeyey iyo waxyaabaha kale ee la doorto sida xulashada dukaamaysiga iyo daweynta isboortiga ayaa sidoo kale loo qoondeeyey doorbidyada maxalliga ah.
Princess Cruises waxay siisaa dadka safarka ah khibrado fasax ah oo macno leh iyagoo isku xiraya midba midka kale, dabeecadda, dhaqamada kala duwan iyo cuntooyinka cusub. Martidu waxay sugi karaan Discovery at Sea, oo ah barnaamij khaas ah oo ka mid ah barnaamijka guddiga oo lagu abuuray iskaashi lala yeesho Isgaarsiinta Discovery. Barnaamijka iyo waxqabadyada waxaa dhiirrigeliya astaamaha shabakadda Discovery ee qiimeynta sare laga helay Discovery Channel, TLC, Planet Animal iyo Channel Channel.
Amiiradan oo ah 116,000-tan oo safiirad ah ayaa xambaarsan 2,678 rakaab ah waxaana ku jira qolal dawladeed aad u tiro badan oo leh balakoonno gaar loo leeyahay, abaalmarinta abaalmarinta ah ee loo yaqaan 'Lotus Spa', steakhouse, wine wine, patisserie, pizzeria, boutiques, iyo Internet café iyo waxyaabo kale.
Wixii loogu talagalay 2016, khibrada saaran markabka Diamond Princess ee Singapore waxay si weyn ula mid noqon doontaa tan ay bixiso Princess Cruises adduunka oo dhan, iyadoo bixinaysa xulashooyin qurux badan oo madadaalo iyo madadaalo ah. Si kastaba ha noqotee, isbeddelada iyo xoojinta qaarkood ayaa loo sameeyay si looga codsado suuqa Aasiya, sida qubayska Japan ee Izumi - kan ugu weyn ee noociisa ah ee badda - iyo sidoo kale makhaayadda Kai Sushi.
Guddoomiyaha Guddiga Dalxiiska Afrika oo u ooyay Afrika...